ပါတီ၏ အခြေခံ အချက်အလက်များပြင်ဆင်
လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု ကာလပြင်ဆင်
နယ်ချဲ့အား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ကာလပြင်ဆင်
ဗိုလ်ချုပ် လုပ်ကြံခံရခြင်းနှင့် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ် ပါတီ က သတ်မှတ်သော ရွှေရည်စိမ် လွတ်လပ်ရေးပြင်ဆင်
ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီခေတ် မြေပေါ် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ် ပါတီပြင်ဆင်
ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း လှုပ်ရှားမှုပြင်ဆင်
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးပြင်ဆင်
ဒီမိုကရေစီအတွက် လက်နက်ကိုင်ခြင်းနှင့် ဖဆပလ၏ အောင်ပွဲပြင်ဆင်
ဖဆပလ နှစ်ပိုင်းကွဲခြင်းနှင့် အိမ်စောင့်အစိုးရပြင်ဆင်
အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦးပြင်ဆင်
အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ပေါင်းစုပြင်ဆင်
တော်လှန်ရေး ကောင်စီ၏ မအောင်မြင်သော ဆွေးနွေးပွဲများပြင်ဆင်
မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ် ပါတီ ကာလပြင်ဆင်
ဆိုဗီယက်၏ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေး လမ်းစဉ် စတင်ခြင်းပြင်ဆင်
ဆိုဗီယက်ကို ကျောခိုင်း၍ တရုတ်နှင့် ပူးပေါင်းခြင်းပြင်ဆင်
မတ်စ်-လီနင် ကိုလည်း မပစ်ပယ်၊ မော်ဝါဒကိုလည်း လေ့လာပြင်ဆင်
ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးကြီး၏ ဂယက်ရိုက်မှုပြင်ဆင်
စင်ပြိုင် ပေါ်ပေါက်လာသော တပ်များပြင်ဆင်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ် ပါတီ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းမှ ဆုတ်ခွာခြင်းပြင်ဆင်
ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဇော ကွန်မြူနစ် ပါတီနှင့် လာရောက် ပူးပေါင်း တောခိုခြင်းပြင်ဆင်
တရုတ် ကွန်မြူနစ် ပါတီ၏ အထောက်အပံ့ ရပ်တန့်ရန် နီးကပ်လာခြင်းပြင်ဆင်
အရှေ့မြောက် စစ်ဒေသရှိ ဘိန်းဘုရင်များပြင်ဆင်
တယူသန် အုပ်စုခွဲဝါဒ (sectarianism)၊ လက်ဝဲ နှင့် လက်ယာ သွေဖည်ရေးဝါဒ (leftist and rightist deviationism) တို့အား သတိပေးဆန့်ကျင်သည်။
လွပ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲပြင်ဆင်
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးပြင်ဆင်
၈၈၈၈ အထွေထွေ သပိတ်နှင့် ဆန္ဒပြပွဲများပြင်ဆင်
ပြည်သူ၏ တောင်းဆိုမှုသာ ဖြစ်သည်ပြင်ဆင်
မပြီးဆုံးသေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ် ပါတီပြင်ဆင်
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ပါတီ ပေါ်လစီ E-book) Archived 21 August 2008 at the Wayback Machine.
ပါတီ ပေါ်လစီ Archived 21 August 2008 at the Wayback Machine.
ပြည်ချစ်ဝါဒ လမ်းစဉ် ကြေငြာချက် Archived 21 November 2008 at the Wayback Machine.
↑ ကွန်မြူနစ် ပါတီ၏ စာမျက်နှာ Archived 29 May 2009 at the Wayback Machine. မှ သမိုင်း အကျဉ်းချုပ်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗမာပြည်_ကွန်မြူနစ်ပါတီ&oldid=676099" မှ ရယူရန်
၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၉:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၉:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။